Shisa Sayensi Archives » Page 2 of 2 » SciBraai
Tag Archives: Shisa Sayensi
Nazi izindaba zesayensi eyenzeke evikini eNingizimu Afrikha kanye nomhlaba wonke. 1. Ikhompyutha eyisimangaliso eyakhiwe eNingizimu Afrikha 2. UNozipho Gumbi ufike kuma-final omhlaba wonke kwi-Famelab 3. USuku lomhlaba lokunikela ngegazi Ikhompyutha eyisimangaliso eyakhiwe eNingizimu Afrikha Onke amazwe omhlaba anamandla kumele abanamakhompyutha anamandla awasiza ukuthi axazulule izinkinga ezibonakala ziyisimangaliso. Izwe leNingizimu Afrikha selingenile nalo ohlwini lalawa mazwe…
June 15, 2016 in #ShisaSayensi, Health & Medical, Science Communication, Technology & Computer Science.
Ngithe uma ngibuka izindaba ezimayelene nesayensi nezobuchwepheshe ezivele kwi-website ye Scibraai.co.za. Shisa Sayensi! uNdlovu no Notho bazobona oSosayensi abakhulu OSosayensi abangabantu abasha ababili bakhethiwe ukuyomela izwe emhlanganweni woSosayensi abayizihlabane umhlaba wonke. Njalo ngonyaka kuhlangana ososayensi abaziwa umhlaba wonke ngokuklonyeliswa indondo ka-Nobel enikwa ososayensi abaziwayo ngemisebenzi yabo ebalulekile. ULuyanda Noto Kanye noSphumelele Ndlovu bakhethiwe ngokuphumelela kwabo emagatsheni…
June 7, 2016 in #ShisaSayensi.